Akụkọ - Ọtụtụ isi ihe na - emetụta ogo karama mmanya
Ọtụtụ isi ihe na-emetụta ogo karama mmanya
Kedu ihe bụ njirimara maka ịmata karama mmanya iko ruru eru? Onye na-emepụta karama mmanya na Easypack ga-agwa gị gbasara isi ihe na-emetụta ogo karama mmanya: ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ogo dị n'ime karama mmanya iko, n'ezie, achọrọ nnwale oyi na ule nrụgide dị n'ime. Chere maka usoro ule. Mgbe anyị nwetara karama mmanya karama nke dị mma ma na-enwu gbaa, na-enweghị agba dị iche, enweghị ire ure ma ọ bụ oghere frying, na ala nke karama ahụ dị n'otu na ọkpụrụkpụ na enweghị ntụpọ doro anya, enwere ike ịgụta ya dị ka iko tozuru oke mmanya karama. Na-ele anya na karama mmanya iko na ọkụ na-enwu gbaa, enwere obere obere egosipụta na karama ahụ. Ihe si na ọnọdụ a pụta bụ na nrụgide dị n'ime iko mmanya mmanya anaghị ezu, nke kachasị na-akpata site na ezughị oke nke ọdọ mmiri na-agbaze na agbaze ezughị oke nke ihe mmiri iko. Ee, ọ bụ okwu dị oke mkpa. Nke abuo: Ọ bụrụ na elu nke ebu na-oxidized mgbe ogologo oge nke ejibeghi ma ọ bụ na-aga n'ihu ojiji na-akpata ụfọdụ adịghị ka rube isi ebu, n'ihi iko mmanya kalama ga-ubé ahaghị. Ọ bụ ezie na ọ naghị emetụta àgwà dị mkpa, ọ na-emetụta ọdịdị ahụ nke ọma.
A na-eji karama na akpa eme ihe n'ọtụtụ ebe, na karama na iko kwesịrị inwe ụfọdụ arụmọrụ ma zute ụkpụrụ ụfọdụ dị mma. Ihe ndị a bụ okwu mkpirikpi nye ndị na-emepụta ngwa, na-enwe olileanya inyere ọtụtụ ndị na-azụta ngwa ahịa aka:
①Igwe iko: dị ọcha na edo edo, na-enweghị ntụpọ dịka ájá, streaks, na egosipụta. Igwe na-enweghị ntụpọ nwere nghọta dị elu; agba nke acha iko bụ edo na mụ, na ike banye uche ike nke a ụfọdụ wavelength.
②Njirimara anụ ahụ na nke kemịkalụ: Ọ nwere nkwụsi ike kemịkal ma ọ naghị arụkọ ọrụ na ọdịnaya. O nwere oke ogo ujo na ike igwe. O nwere ike iguzogide usoro kpo oku na usoro jụrụ oyi dị ka ịsa ahụ na ịmị nwoke, yana iguzogide ndochi, nchekwa na njem. Ọ nwere ike ịnọgide na-emebi emebi mgbe ị na-ezute nsogbu dị n'ime na nke mpụga, ịma jijiji, na mmetụta.
③Qualitymepụta àgwà: ịnọgide na-enwe ụfọdụ ike, ibu na ọdịdị, edo mgbidi ọkpụrụkpụ, ezigbo onye na ewepụghị ọnụ iji hụ adaba ndochi na ezi akara. Enweghị ntụpọ dị ka ntụgharị, enweghị oke, enweghị oke na mgbawa.
Ndị na-emepụta karama iko nwere ike rụpụta ọkachasị gụnyere ogbe nkwadebe, agbaze, akpụ, annealing, elu ọgwụgwọ na nhazi, nnyocha na nkwakọ.
①Ogbe nkwadebe: gụnyere nchekwa, na-erikpu, agwakọta na erute nke ogbe ihe. Ogbe ihe a chọrọ na-uniformly mbuaha ma nwee anụ chemical mejupụtara.
②Agbaze: A na-eme ka agbaze iko karama na-aga n'ihu n'ọkụ ọkụ ọkụ (lee ọkụ na-agbaze iko). Nmeputa ubochi nke oku oku oku kariri 200t, ndi buru ibu rue 400 ～ 500t. Ihe a na-emepụta n'ụdị ịnyịnya nke na-ere ọkụ na-ere kwa ụbọchị dị n'okpuru 200t. Igwe na-agbaze iko dị ruo 1580 ～ 1600 ℃. Ike oriri nke agbaze na-eme ihe dịka 70% nke ike oriri na mmepụta. Ọ nwere ike ịchekwa ike nke ọma site na ikpochapu tankị nke ọma, na-abawanye ikike nke brik ndị nyocha na regenerator, na-emeziwanye nkesa nke ikpo, na-abawanye arụmọrụ ọkụ na ịchịkwa ntụgharị nke mmiri iko ahụ. Afọ na agbaze mmiri nwere ike imeziwanye convection nke mmiri iko ahụ, mee ka nkọwapụta na usoro homogenization sikwuo ike, ma mee ka mmepụta ya pụta. Iji ọkụ eletrik na ọkụ ọkụ nwere ike ịbawanye mmepụta ma melite ogo na-enweghịwanye ọkụ.
Post oge: Ọkt-09-2020
Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta,